Qalalan Madaafiic Plant, qallalan Qase Machine, Powder Machine xirxirida - QuanHua
Qalalan Madaafiic Plant
Ready Large Mix caadiga qallalan Madaafiic Plant
Gaarka ah ee qallalan Powder Madaafiic Plant
QH-40 Taxanaha qallalan Powder Madaafiic Plant
QH-60 Taxanaha qallalan Powder Madaafiic Plant
Wall Putty dhexgalo Machine
QH-20 Simple Wall Putty dhexgalo Machine
QH-50 Full-Auto Wall Putty dhexgalo Machine
Tile koollo Warshadaha Plant
Qalalan Mix Madaafiic Plant
Machine Qase qallalan
Usheeda dhexe Double fiicni taki
LDH Xaadhayo fiicni Machine
Ribbon fiicni Machine
Ururinta boodhka on sare ee Shiiloh
Powder Machine xirxirida
mashiinada buux Open Af Bag
bac Jumbo Machine Buuxinta
mashiinka lagu cabayn Rotary
Madax Bag xirxirida Machine
Chain NE baaldi wiishka
TD Belt baaldi wiishka
Chain TH baaldi wiishka
Hammer Xudhama Machine
Daanka Xudhama Machine
Automatic ku xereen iyo plastering Machine
Madaafiic ku xereen Machine
Floor la taaban karo Machine dersey
India Macaamiisha-15-Full-auto warshad fiicni madaafiic qalalan
Macaamiisha Malaysia -25TH qallalan dhirta Auto Full-Malaas fiicni madaafiic
Qatar Macaamiisha-10aad FULL-JIRADA ENGAJI madaafiic fiicni Plant
Russia Macaamiisha-30-Full-auto warshad fiicni madaafiic qalalan
UAE Clients- 15 Semi-auto warshad fiicni madaafiic qalalan
Uzbekistan Macaamiisha-20 Full-auto Tower Nooca qallalan Madaafiic fiicni Plant
Isku qas ENGAJI warshad madaafiic
QH-30 Nooca sahlan oo qallalan Mix Madaafiic Plant, waxaa la degay dadban (ay khuseyso in ay warshad yar yahay), qaab aad u fiican, hawlgal fudud, daboolo meel ka mid ah aag yar, yar unit shaqada (2-3), waxyaabaha sare qasin [.. ] Read More
Leben koolo warshada
Warshad wax soo saarka koolo Tile waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro koolo dhoobada leben, filler, ilaalinta kulaylka nidaamka isticmaalka multiplexed madaafiic koolo, hoobiye dhagaaxda [..] Read More
Isku qas DIYAAR warshad Malaas
Warshad isku darka malaastaan Ready waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro tayada sare iyo gypsum malaastaan deegaanka iyo gypsum is-dheellitir. Gypsum malaastaan waa Nigeria aasaasiga ah. Qoraalkani wuxuu ku cayriin ee [..] Read More
Shandong QUANHUA Import & dhoofinta CO., LTD.
QUAN Hua Group xaruntiisa ku taalaa Jinan, magaalada of ilo, waa shirkad ganacsi oo baaxad weyn oo ah keenidda ganacsiga wax soo saarka, cilmi sayniska, iibka, soo dejinta iyo dhoofinta. Shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 2003. cinwaanka Our warshad waa Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang City, Gobolka Shandong, daboolaa meel ka mid ah 200,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo goobta dhismaha 120,000 mitir murabac oo ah, iyada oo 300 oo shaqaale, Waxaa hadda la dhisayo qaab dhismeedka guud, warshadaha waaweyn waa inta badan ee mashiinada dhismaha, kaabaya waa rakibaadda iyo dhismaha.
Annagu waxaannu nahay isku qasin BIXIYEYAASHA XALKA
Sida soo saaraha ah ee hormuudka ka ah warshad madaafiic isku darka qalalan iyo mashiinka qalabka dhismaha ee china, waxaana naga go'an in ay safka hore ee technology iyo hal-abuurka iyo si joogto ah horumarinta dhammaan meelaha of our ganacsiga. Qorshahayagu waxa naga caawisaa helaan boos adag ee suuqyada caalamka oo ay hubisaa in koritaanka muddo dheer ah. brand QUAN Hua waa caanka ah ee warshadaha iyo mashiinka ayaa laga dhoofiyey in Malaysia, Vietnam, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Qatar, Algeria, Masar iyo dalal kale. Ayaa ku guuleystay taageero iyo kalsooni macaamiisha ah ee.
ISO iyo shahaado CE
Perfect Ka dib-Sales Service
24-ka saac online reply ama wac dib
Dayactir iyo quick- qaybo Duugga sahayda
-Tababarka Bilaashka ah ee ka shaqeeya aad
Waa maxay malaastiisa oo engegan?
1. Marka la barbardhigo madaafiic shaqo-site, hoobiye qalalan waxaa kaloo loo yaqaan pre-madaafiic isku dhafan, kaas oo la soo saaray ee warshadda leh qalabka quduuska on batching iyo qasayso ah maaddooyinka in geedi socodka aadka u maamusho. Waxaa si toos ah loo isticmaali karaa oo kaliya by isagoo intaa ku daray biyaha ee goobta shaqada.
2. Waxay leedahay faa'iidooyin ah oo tayo leh oo joogto ah, inventory gacanta, waqtiga lagu badbaadinayo iyo kharashka shaqada. By ku daray daro kiimiko kala duwan, waxa uu leeyahay sifooyin wanaagsan curaarta, kulka iyo ningax loomana baahno, crack-caabin, workability, Water-haynta, xirtaan-caddayn, anti-daxalka, iwm
3. madaafiic qallalan dhigma kartaa noocyada kala duwan ee qalabka cusub ee dhismaha by hagaajinta dejinta. Guryaha wanaagsan ma aha oo kaliya kor loo qaado tayada dhismaha iyo nolosha si weyn, laakiin sidoo kale hoos u isticmaalka ee hoobiye in degree weyn.
4. Baahida madaafiic qalalan ayaa si degdeg ah kor ay sabab u tahay mudnaan fiican barbar la waalan hoobiye in shaqo-site ka.
Haddii aad jeclaan lahayd si ay u dhisaan warshad madaafiic qalalan ee warshadda, Kooxda QuanHua fiicni our isticmaali doonaan ay khibrad badan iyo aqoon farsamo si loo hindiso cusub oo injineernimada hor-dhamaadka ee qallalan Mix Madaafiic Warshadaha.
Our injineerada khibrada sare leh siiyaan design qalalan dhirta isku darka, taageero bilaabi-up, dhib, tababarka, dib u eegista ra'yiga labaad iyo kabidda adeegyada aad kordhiso awoodda warshad madaafiic isku darka qalalan. Haddii aad diyaar u tahay in badan oo ku saabsan adeegyada naga bartaan yihiin, waxaan diyaar u yihiin in uu kaaga caawiyo design ee looga baahan yahay.
Waxaa naga go'an in ay bixiyaan kharashka xal wax ku ool ah iyo wax soo saarka oo tayo leh u Gabdooma aad u degdeg ah. Waxaan nahay mid ka mid ah dhowr ah ciddii wax garan shuruudaha tayada iyo gudbinta macaamiisheena gudaha iyo kuwa caalamiga ah. dhirta madaafiic qalalan waxaa loogu talagalay ilaalinta ku hay madaafiic isku darka qalalan filasho qandaraasle warshad on maalgashiga.
Soo saaridda IYO BAADHISTA
QuanHua fiicni Qalabka Machine Factory daboolayaa meel ka mid ah 200,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo goobta dhismaha 120,000 mitir murabac oo ah, iyada oo 300 oo shaqaale xirfad leh. All soo saaridda mashiinka qalabka sida ay caadiga ah ISO9001 iyo CE ah. Ka dib markii la soo saaray, mashiinka oo dhan si adag loo baari doonaa ilaa orod iyo sidoo kale.
Our mashiinka mari karin kormeerka SGS iyo kuwa kale, si kooxda diyaarin laga yaabaa in la sameeyo ka hor inta kormeerka shixnad.
Waayo, mid go'an geedka madaafiic qalalan, haddii motor u baahan Siemens oo waxay u baahan yihiin 2 bilood mar-soo-saarka, mashiinka kale oo dhan ay isticmaalaan 30-45 maalmood wax soo saarka.
Sida hogaamiye caalami ah in industry ee, waxaan ku siin macaamiisha xirmo adeeg buuxa iyo aqbali karin mashruuca macasha macaamiisha. Waxaan si buuxda adeegyada rakibaadda iyo dhismaha qalabka oo dhan waxaan sameeyo iyo in la siiyo. Our xidhaba xirfad iyo khibrad sare leh beerta waxaa ka go'an in ay dherginaya shuruudaha ugu ba'an macaamiisheena '.
Adeegyada Our dib-u-rakibo oo ay ku jiraan meelaynta & lays, dib u dhiska iyo hagaajinta, dayactirka iyo adeegyada dib-u-rakibo. Awoodaha ka mid ah naqshadaynta nidaamka, goob qalab, qalabka dhaqaaqaan, nidaamka bilowdo & guddiga & maamulka mashruuca & qalab kale oo kala duwan halkii shuruudaha ku qeexan.
Room 617, Flat F, No. 9999, Jingshi Road, Degmada Lixia, Jinan City, Gobolka Shandong, Shiinaha
Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang City, Gobolka Shandong, Shiinaha
Dry Mortar Mixing Machine With Skim Coat, Z Type Of Bucket Elevator, Wall Putty dhexgalo Machine, Qalalan Powder Qase fiicni, Qalalan Powder fiicni Machine, Automatic qallalan Madaafiic Plant,